Ku Labo Jibaaro Fursadahaaga
Iska Joojinta Taageerid Lacag La’aan Ah
Wac 1-800-784-8669 si aad
isugu diiwaangeliso Af Soomaali.
Caawinaad Lacag La’aan ah Si Aad Isaga Joojiso Habkaaga
Quit Partner waa habka lacag la’aan ah ee Minnesota looga joojiyo nikotiin-ka, oo ay ka mid yihiin sigaar cabista, cabista sigaarka elektroniga ah iyo tubaako calaajinta. Waxaan kugu taageeri karnaa joojintaada tababar ah qof-iyo- qof iyo qalabyo kale oo waxtar leh. Mar walba oo aad noo baahatid, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno 24/7.
Waxaa lagu sameeyey iyadoo laga helay hagis bulshada, American Indian Quitline waxay bixisaa taageerid gabi ahaan lacag la’aan ah oo si gaar ah loo sameeyey in ay ku caawiso adiga, ama qof aad taqaano, inaad iska joojisaan tubaakada ganacsiga.
Xirfad-yaqaanada Daryeelka Caafimaadka iyo Xirfad-yaqaanno kale
Baro sida loogala hadlo bukaanada, macaamiisha, ardayda, dadka-diinta-ku-dhaqma iyo shaqsiyaadka kale Quit Partner.
Wax dheeraad ah ka baro barnaamijkeena oo u hel jawaabo su'aalaha badanaa la isweydiiyo.